लकडाउन, सरकार र अभिभावक विहिन जनता
२०७६ चैत्र २९ गते १८:१५
चीनले ३१ डिसेम्बरमा एक किसिमको नयाँ निमोनिया जस्तो रोग देखिएको जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई गरायो । जनवरी ३ मा ४४ वटा उस्तै लक्षण भएको व्यक्तिहरु पहिचान भए । जसमध्ये ११ जना सिकिस्त थिए । ३१ डिसेम्बरमा देखिएको शंकास्पद रोगबाट सजग भएर चीनले बुहान शहरमा संक्रमण भेटिएको सम्पूर्ण तरकारी बजार क्षेत्रलाई जनबरी बन्दगरी जनवरी १ माम स्यानिटाइज गर्ने काम गर्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमण शूरु भएको ... read more...
'एक स्त्री आखिर के चाहन्छिन् ?'
२०७६ चैत्र २७ गते १५:४५
राजा हर्षवर्धन युद्धमा हारे । उनलाई हत्कडी लगाएर छिमेकी राजासामु पेश गरियो । छिमेकी राज्यका राजा जीतदेखि प्रसन्न थिए । र, युद्ध जितेका राजाले हर्षवर्धनसामु एक प्रस्ताव राखे ।यदि तिमीले एक प्रश्नको जवाब दियौ भने मैले तिम्रो राज्य फर्काइदिन्छु, अन्यथा जन्म कैदको लागि तयार हुनु । प्रश्न हो, एक स्त्री आखिर के चाहन्छिन् ? यसको लागि तिमीसँग एक महिनाको समय छ । हर्षवर्धनले यो प्रस्ताव स्वीकार गरे । ... read more...
कानुनका रखवाला नै हिंश्रक, पत्रकार नै यौन शोषणमा
घटना १: बलात्कारको घटना लुकाउन गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने दुई डाक्टरले अदालतको आदेश विपरित बिरामीको चेकजाँच गरिरहेका छन् । तत्कालीन जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकद्वय डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतले आर्थिक प्रभावमा परी बलात्कारको घटना लुकाउन गलत रिपोर्ट दिएर कारवाहीका भागिदार भएका थिए । उनीहरुलाई विशेष अदालतले १ पुस ०७६ मा ६ महिना कैद सजाय र २५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो भने नेपाल मेडिकल ... read more...
महिला नेतृत्वको उपेक्षा पुरुष कि महिलाबाट ? यस्तो छ तथ्य
महिलाविरुद्ध यौनजन्य हिंसा नेपालको मात्र नभएर विश्वकै समस्या बन्न थालेको छ । महिला हिंसा विरुद्ध ह्यासट्याग 'मि टू' र ह्यासट्याग 'टाईम्स अप' जस्ता अभियान समाजिक सञ्जालमार्फत विश्वभर चलिरहेका छन् । यस्ता अभियानले महिलाको सामाजिक विकास गर्ने संसारभरका महिलालाई एकतावद्ध गराउने लहरको समेत थालनी गरेको छ । तर, महिला विरुद्धका हिंसा पितृसतात्मक सोचका कारण पुरुषद्धारा मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता अहिलेको अवस ... read more...
'भेलेन्टाइन डे' को सट्टा राधाकृष्ण प्रेम-दिवस किन नमनाउने ?
प्रेम भन्नु समर्पण हुन्छ । आफूलाई बिर्सिएर, आफूलाई त्यागेर सबै उनैमा समर्पित हुनु प्रेम हो । अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा उनकै निम्ति बाच्न र मर्न मन लाग्नु, उनकै खुशीमा आफूलाई देख्न्नु र उनका आँखामा आफू बसेको लाग्नु, सम्पूर्ण मन, शरीर र चेतनाले नै उनमा समाबेश भएको लाग्नु नै शायद प्रेम हो । शारीरिक मोहले आत्मीय प्रेमको मार्गलाई अन्तिम कालमा त्याग्दछ । प्रेमका सामु कुनै पनि चीज पनि उपस्थित हुनु हुदैन । ... read more...
यस्तो छ यथार्थ: के पितृसत्ताले महिलाको नेतृत्व स्वीकार नगरेकै हो ?
भर्खरै मात्र संसदमै पूर्व उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहम्फेलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारियो । राजिनामा दिएपछि ‘पितृसत्ताले हरायो तर गलाउन सकेन ’ भन्दै महिला अस्तित्वको पक्षमा बोलिरहँदा उनलाई सांसद वृतबाट समेत कसैले हौसला दिएन । सभामुख पदको दावेदार उनलाई किन सभामुख बन्न दिइएन ? यसको उत्तर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग पनि छैन । शैक्षिक योग्यता र जीवन संघर्षका ... read more...
आखिर गंगाजीमा विसर्जित गरिएका अस्थिहरु कहाँ जान्छ ?
आज गंगा भला प्रदूषित भैसकेको छ । परन्तु लोकको विश्वास गंगाप्रति अहिले पनि कामय छ । माता गंगाप्रति श्रद्धालुहरुको अटूट आस्थाको अनुमान तपाईहरुले यो कुराबाट लगाउन सक्नुहुन्छ कि प्राय हरहिन्दूको घरमा गंगाजल पाइन्छ । मृत्युशैयामा परेका हरमान्छेलाई दुई थोपा गंगाजल पिलाउनु गंगाप्रति लोकको आस्था र हिन्दू परम्पपरालाइ दर्शाउँछ । यति मात्र होइन, मृत्युपछि पनि अस्थिकलशलाई गंगामा विसर्जित गर्ने धार्मिक मान्यता ... read more...
द लिडर रियालिटी शो: दलबहादुर नबनी बाँच्नै नसकिने त होइन नि !
रवि लामिछानेले 'नेतृत्व' खोज्ने एउटा रियालिटी शो चलाउने भएछन् । अरिङ्गालको गोलो त्यतै खनिन शुरू भएछ । तर्क छ नेता 'आन्दोलन' ले जन्माउने हो, रियालिटी शो' ले होइन । उसो त सुन्दरी जन्मिने पनि सुन्दरी प्रतोयोगिताबाट होइन, आमाबाट हो । गायक जन्मिने साधनाबाट हो 'नेपाल आइडल' या 'सारेगमप' बाट होइन । तिनलाई लाग्दो रहेछ नेता जन्मिने ढोका सधैँ एउटै हुन्छ र त्यसको चाबी तिनीहरूसँग मात्रै छ । रविहरूले 'नेता' खोज ... read more...
यदि यो घटना सत्य हो भने जनताको कलेजो भुटेर खाने इदी अमिनको नेपाली छाउरा अफताब आलम र त्यसका वफादारहरूलाई देख्दा लाग्छ नेपाल त्यस्तो अभागी राष्ट्र हो जसलाई राजनीतिक अपराधीहरूले चुसे, लुटे र खुर्केर खाए । यो कस्तो दुर्भाग्य हिटलरका नेपाली अवतारहरूलाई नेपाली जनताले लोकतन्त्रको पहरेदार ठानिरहेका छन् र ज्वाँइ पाले झैं पालिरहेका छन् । १२ वर्षपछि अफताब आलमको असली चेहेरा सार्वजनिक भएको छ । यो चेहेरा यति कु ... read more...
'चीनले नेपाल सरकारलाई राम्रोसँग चिनेको छ'
म सिधा कुरा बुझ्छु, कुटनीतिक भाषा त्यति बुझ्दिनँ र म विदेश मामिलाको विशेषज्ञ पनि होइन । मेरो सोझो दिमागले भन्दैछ मच्चिनुको कुनै अर्थ छैन, मच्चिनुको अर्थ थच्चिनु पनि हो । नेपाल सरकारलाई चीनले राम्रोसँग चिनेको छ । सीको नेपाल भ्रमण गर्वको कुरा हो । २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउन सफल वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । 'नेपालको बुद्ध धर्म अहिले चीनको स्थानीय धर्म वनेको छ' माथिका भना ... read more...
विदेशमा बस्ने सबै ८० लाख नेपाली एनआरएन होइनन् । अनुमानित तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने अहिले ८० लाख जति मानिस विदेशमा बस्ने अनुमान गरिन्छ । तर, एनआरएनएको विधानले दुई वर्षभन्दा बढी सार्क राष्ट्रबाहेकका मुलुकमा पढाई, व्यवसाय लगायतका कामले वसोबास गर्ने जो कोही नेपालीलाई पनि एनआरएन भनेर परिभाषित गरेको छ । यो परिभाषालाई मान्ने हो भने करिब ५० लाख जति नेपालीलाई एनआरएन भन्न सकिएला । के ५० लाख नेपाली सबै एनआरए ... read more...
समर्थन र आत्मबोध: 'संस्कृत जिवन जिउने भाषा पनि हो'
अधिकांश संस्कृत भाषाको विरोध गर्नेहरू परायाले मतिभ्रष्ट पारिएका अभिशप्त जमात हुन् । तिनका न कुनै गरिमामय ईतिहास छ, न यही मति कायम रहिरहे भविष्यमा हुनेछ । दुनियाँमा सबै प्राचीन समृद्ध भाषामा साहित्य, विज्ञान, कला, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृतिजस्ता ज्ञान समाहित भएको हुन्छ । भाषाको अध्ययन गरे पो तिनको लाभ लिई प्रबुद्ध भईन्छ । जसको ईतिहॉस गरिमामय छैन वा जसले आफ्नै ईतिहासलाई दुत्कार्छ ती समाजमा पनि स्वतः ... read more...
त्यो एउटा त्यस्तो खबर जसले महराको इतिहास मेटायो
काठमाडौं । ०७६ असोज १२ गते अर्थात गत सोमबार आजैको दिन थियो । हाम्राकुरा डटकमका सम्पादक अजयबाबु सिवाकोटीले साँझपख सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक जना सांसदको कुकृत्य सार्वजनिक हुन लागेको जनाउ गरे । लगत्तै केहि समयपछि उनले आफ्नो अनलाइनमार्फत तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको यौन काण्ड प्रथम पटक सार्वजनिक गरे-‘सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जवरजस्ती करणीको आरोप शिर्षक र पीडितको घरमा गएको महराद्धार ... read more...
भ्रष्टाचारको विरोध हुनुपर्छ । तर त्यस विरोधको मसिहा मैं हुँ भन्ने केही अभियन्ताले भ्रष्टाचारका विवरण होइन, कुन बेला कुन नेतालाई कसरी गाली गर्ने भन्ने डिक्स्नरी बोकेको भेटिन्छ । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि फिटिक्कै बेथिति छैन भन्ने होइन, थिति बसाल्नका निम्ति चुनौति छ । जताततै नाफाखोरले बद्नामीको दाग लगाइ दिन सक्छन् शक्तिकेन्द्रका मानिसलाई । त्यस मध्येका एक हुन्, प्रचण्ड । सडक र गल्लीमा लोकतान्त्रिक गणत ... read more...
पढौं, बुझौं: सबै भन्दा ठूलो महाव्रत र महातप !
२०७६ असोज ५ गते ०९:२१
एउटा गाँउमा जानकी नामकी बुढी आमा बस्थिन् । उनको छोरा बुहारी शहरमा बसोबास गर्थे । तर उनलाई गाँउ छोड़ने मन भएन । त्यसैले उनी एक्लो नै बस्थिन् । उनी सधैं झैं मन्दिर गएर फर्किदै थिइन् । बाटोमा उनको सन्तुलन बिग्रेर लडिन्। गाँउलेहरुले उनलाई उठाएर पानी पिलाए र सम्झाएँ अब यो अवस्थामा एक्लै रहन उचित हुदैन । कुनै एउटा छोरासँग जाउ । जानकीले पनि परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै छोरा बुहारीलाई लिएर जानको लागि फोन गर् ... read more...
हरेक वर्ष झै यो वर्ष पनि संसारभरि छरिएर बसेका सबै नेपाली नारीहरुले धुमधामका साथ भव्य र उल्लापुर्ण रुपमा तीजलाई विदा गर्दैछन् । हुनेखानेले महिना दिनदेखि भोज भत्तेर गरेर यो चाड मनाए भने हुँदाखानेले भने आफ्नो गच्छे अनुसार यो पर्वलाई मर्न दिएनन् । अमेरिकाको भर्जिनियामा अघिल्लो हप्ताको शनिवार अगष्ट २४ मा रामप्रसाद खनालको संस्थाले र अगष्ट ३१ मा अमेरिकी नेपाल सहयोगी संस्थाले भव्य रुपमा तीज सम्पन्न ग ... read more...
राष्ट्रिय राजनीति भनेको नीति, नैतिकता, ईमान्दारिता, ईच्छा, तत्परता, दृढ संकल्प, तर्क र समझदारीको संगम हो। एक पटक सचेत नेपाली नागरिक हौं । पार्टी भन्दा माथि राष्ट्र हुन्छ भन्ने हेक्का राख्दै ख्याल गरौं । देश बेचेर सत्ताको शिखरमा आजन्म बस्छु भन्ने लेण्डुपको सपना कहिल्यै पुरा भएन् । के नेपालमा पनि यस्ता लेण्डुपहरु त छैनन् ? समयमै चिनौं । भारतीय प्रधानमन्त्रीको ईमान्दार कारिन्दाको रूपमा सन १९७५ अप्रिल ... read more...
योग्यता प्रणाली विरुद्ध 'लुटतन्त्र' हावी हुने खतरा
योग्यता प्रणालीको संरक्षक, मध्यम वर्गिय शैक्षिक जनशक्तिको रोजगारीको माध्याम लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन विवादमा परेपछि रोजगारीको खोजीमा रहेका लाखौं युवाको सपना टुटेको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले स्थानिय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गरिरहेका लाखौं परीक्षार्थीहरु बिचल्लीमा परेका छन् । लो ... read more...
सरकारले सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य अघि सारेसंगै जनतामा विकास र सुशासनको अभिलाशा जागृत भएको छ । आम नागरिक आर्थिक सामजिक रुपान्तरण तथा समुन्तन जीवनस्तरको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । राज्यले संघीय शासन पद्धतिको अवलम्वन गरेदेखि नै जनताले आफ्ना सपना साकार हुनेमा आशाबादी बनेका थिए । सुशासन र समृद्धिको महत्वाकांक्षामा रहेका जनताले अपेक्षाकृत प्रतिफल भने पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक, सामाजिक तथ ... read more...
मे डे: कर्मकाण्डी कि वास्तविकता ?
सामान्यतया शारीरिक र मानसिक मेहनत गरेवापत ज्याला प्राप्त हुन्छ भने त्यस्तो मेहनतलाई श्रम भनिन्छ । मार्सलका अनुसार व्यक्तिले आफ्नो हात अथवा टाउकोद्धारा कुनै वस्तु प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सम्पन्न गर्ने प्रयत्नलाई श्रम भनिन्छ । परिभाषाबाट स्पष्ट हुन्छ की श्रम कुनै पनि मानिसको क्रियाशिलता हो । जसबाट उसले आफ्नो दैनिकी जिवनयापन गर्न सक्दछ । जिवनयापन सवैको पहिलो आवश्यक शर्त हो । जीवनयापन हुन सकेन भने व् ... read more...